Ihe Ga-enyere Gị Aka Ịna-ejide Onwe Gị ma A Kpasuo Gị Iwe | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Abkhaz Abua Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Belize Kriol Bicol Bislama Boulou British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Maya Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Russian Sign Language Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ihe Ga-enyere Gị Aka Ịna-ejide Onwe Gị ma A Kpasuo Gị Iwe
Di gị ma ọ bụ nwunye gị kwuru ma ọ bụ mee ihe were gị iwe, gị agbalịa ime ka o nweghị ihe merenụ. Ma, ya emechaa chọpụta na o nwere ihe na-ewe gị iwe, ya ajụwazie gị ihe na-ewe gị. Ihe a ọ na-ajụ gị bịaziri wewekwuo gị iwe. Olee ihe ga-enyere gị aka ijide onwe gị ma ụdị ihe a mee?
Iwe iwe nwere ike ịkpatara gị ọrịa. Ndị ọkachamara na-ekwu na mmadụ iwe oké iwe nwere ike ịkpatara ya ọbara mgbali elu, ọrịa obi, na ịda mbà n’obi. O nwekwara ike ime ka ihe ndị na-eme ka nri na-agbari n’ahụ́ mmadụ ghara ịna-arụ ọrụ nke ọma. E kwukwara na iwe nwere ike iso n’ihe ndị na-akpata ehighị ụra nke ọma, oké echiche, ọrịa strok na ọrịa ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji kwuo, sị: “Hapụ iwe, . . . ewela iwe naanị iji mee ihe ọjọọ.”​—Abụ Ọma 37:8.
Ibu iwe n’obi nwekwara ike ịkpatara gị nsogbu. Mmadụ ibu iwe n’obi ruo ogologo oge yiri ọrịa nwere ike iri mmadụ ahụ́. Dị ka ihe atụ, o nwere ike ime ka ị ghara ịna-atụkwasị ndị ọzọ obi. Ụdị àgwà a nwere ike ime ka gị na ndị ọzọ na-esekarị okwu, o nwekwara ike isere gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị ezigbo okwu.
Chọpụta àgwà ọma ndị di gị ma ọ bụ nwunye gị nwere. Depụta àgwà atọ di gị ma ọ bụ nwunye gị nwere na-amasị gị. Mgbe ọzọ ọ ga-eme ma ọ bụ kwuo ihe kpasuru gị iwe, chee banyere àgwà ndị ahụ i depụtara. O nwere ike inyere gị aka ijide onwe gị ma ọ kpasuo gị iwe.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Gosikwanụ na unu bụ ndị nwere ekele.”​—Ndị Kọlọsi 3:15.
Na-agbaghara ma e mejọọ gị. Buru ụzọ ghọta ihe di gị ma ọ bụ nwunye gị na-ekwu. Ọ ga-eme ka ihe banyere ya na-emetụ gị n’obi. (1 Pita 3:8) Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịjụ onwe gị, sị, ‘Ihe a o mere m ọ̀ dị oké njọ nke na agaghị m agbagharali ya?’
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Ileghara mmejọ anya bụkwaara ya ịma mma.”​—Ilu 19:11.
Na-ekwu okwu otú na-egosi na i nwere obiọma, jirikwa akọ kwuo ya. Ị chọọ ikwu ihe merenụ, kwuo otú obi dị gị maka ya kama ịtawa di gị ma ọ bụ nwunye gị ụta. Dị ka ihe atụ, kama ịsị, “Ị naghị achọ ịma gbasara m, ọ bụ ya mere na ị kpọghị m, gwa m ebe ị nọ,” kwuo, sị, “M nọ na-echegbu onwe m na chi ejiela ma ị lọtabeghị, amaghịkwanụ m ma udo ọ̀ dịkwa.” Iji nwayọọ kwuo okwu nwere ike inyere gị aka ijide onwe gị ma a kpasuo gị iwe.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Ka okwu unu dịrị n’amara mgbe niile, ka ọ bụrụ ihe e ji nnu mee ka ọ dị ụtọ.”​—Ndị Kọlọsi 4:6.
Na-ege ntị nke ọma. I kwuchaa otú obi dị gị, chere ka di gị ma ọ bụ nwunye gị zaghachi. Anarakwala ya okwu n’ọnụ. Mgbe di gị ma ọ bụ nwunye gị kwuchara, kwughachi ihe ahụ o kwuru ka ị mata ma ị̀ ghọtakwara ihe o kwuru. Naanị ntị ahụ i gere ya nke ọma nwere ike ime ka i jide onwe gị.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “[Bụrụ] onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa.”—Jems 1:19.
“Ọ bụrụ na i buru iwe n’obi, ihe ahụ mere ka ga na-emekwa. Ka oge na-aga i nwere ike iji iwe mee ihe ị na-achọghị ime. Ọ ka mma ka unu jiri nwayọọ kwurịta ya. Mụ na di m kwurịtachaa ihe na-esere anyị, anyị na-agwakarị ibe anyị, sị, ‘Ka anyị bụrụghachi enyi.’”​—Jennifer na di ya Tim.
“Ihe na-atọgbu m atọgbu n’ebe di m nọ bụ na ọ na-egekarị m ntị, na-echebakwara otú obi dị m echiche. Ọ bụrụgodị na o kwetaghị ihe m kwuru, ọ na-echebara ya echiche. Ọ naghị emenye m ihere n’ihi ihe m kwuru.”​—Jade na di ya Corey.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Ga-enyere Gị Aka Ịna-ejide Onwe Gị ma A Kpasuo Gị Iwe
ijwhf isiokwu 1